Ahoana ny fomba fampiofanana mpiandry alemanina | Alika Manerantany
Ny mpiandry ondry alemanina dia nanaporofo izany tena mahatoky ary tena manan-tsaina. Noho io antony io, io dia iray amin'ireo karazan-java-maniry indrindra izay te-hianatra sy hiasa. Ankehitriny, tsy maintsy dinihintsika ihany koa fa mora mankaleo azy ireo, ary raha manana alika mankaleo efa ela isika dia hipoitra tsy ho ela ny olan'ny fitondran-tena.
Satria tsy misy fanafody tsara kokoa noho ny fisorohana, andao hojerentsika ny fomba hampiofanana mpiandry ondry alemana.
Rehefa te hampiofana alika isika, na inona na inona ny karazany, na raha mongel, dia ampirisihina hatrany hanomboka rehefa feno roa volana ny biby. Ary mila mandeha tsikelikely foana ianao: mandra-pianaranao zavatra iray izay tianay hampianarina anao (ohatra ny baiko hoe "mipetraha") dia tsy hiroso amin'ny manaraka isika. Amin'ny tranga manokana an'ny Mpiandry Alemanina dia mila mahazo antoka koa isika mifanerasera tsara miaraka amin'ny alika sy olona hafa, satria afaka miaro be izy ireo. Mba hanaovana izany dia mila mitondra azy mivoaka mitsangatsangana ianao rehefa efa manana, farafaharatsiny, ny vaksiny voalohany, ary avelao izy hanakaiky ny alika.
Ny hevi-dehibe iray hafa dia ny famelana ny tenanao ho voatohina. Tokony hieritreritra ianao fa ho alika lehibe izy io, koa raha tsy ampianarintsika tsara izy dia afaka manao ratsy ny biby ary manao zavatra tsy tiantsika. Noho izany, hatramin'ny andro voalohany dia mila mikasika azy ianao, toy ny hoe hikororoka azy isika, ary handinika ny tongony, sofina, nifiny, raha fintinina, ny vatany iray manontolo. Farany, hanome loka anao izahay noho ny fitondran-tenany tsara.
Fotoana fitsapana: ora fisakafoanana
Mba hisorohana ny olana amin'ny ho avy dia tsara ny handefasantsika baiko ho azy (ohatra hoe "mipetrapetraka" na "mijanona") alohan'ny hametrahana ny mpanome sakafo amin'ny tany. Raha mbola tsy nianatra azy ireo ianao, dia avelantsika eo amin'ny tany ihany koa ny lovia, ary hokapohintsika roa na intelo mandritra ny fisakafoanao. Tsy maintsy mianatra ianao fa anao ny sakafo ary tsy hisy hanaisotra izany (tsy isika akory), ary noho izany dia tsy mila masiaka na zavatra toa izany ianao.
Azonao atao ihany koa ny manome sakafo azy mivantana eo am-pelatananao mandritra ny fotoana vitsivitsy, saingy tsara kokoa raha mihinana avy amin'ny lovia ny alika, satria raha tsy izany dia mety hitranga izany lasa miankina be aminao ka hatramin'ny tian'izy ireo hanome anao ny sakafo fotsiny.
Ny mpiandry ondry alemanina dia alika mila miasa ary, ambonin'izany rehetra izany miala voly. Ataovy toy ny lalao ho azy ny fampiofanana azy, hamafiso ny fihetsiny tsara amin'ny fitsaboana sy fitsaboana amin'ny alika, ary ampirisiho izy hanohy (raha tsy efa reraka izy, mazava ho azy 🙂). Ka hanangana finamanana tsy hay hadinoina ianareo roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana no hampiofanana mpiandry alemanina
Ahoana ny fikolokoloana ny alika?